မည်သို့ပင် ပြုလုပ်ပေးသည်ဆိုပါစေ တံတားအောက် နေရာကျော်သော အိမ်ခြေမဲ့များအတွက်က များစွာ အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုလို နေရာမျိုးတွင် အိမ်ခြေမဲ့ဖြစ်သွားပါက ဘဝကို ပြန်လည်ထူမရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကျောခင်းစရာ နေရာမရှိသည့်ဘဝတွင် စားစရာ အစားအစာနှင့် အလုပ်အကိုင်ကလည်း အလွန်ခက်ခဲပေတော့သည်။ ပရဟိတအဖွဲ့များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၏ ကူညီပေးမှုကြောင့် အချို့က အထိုက်အလျောက် အဆင်ပြေကြသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူ အတော်များများသည် နွမ်းပါးသော မိသားစုများက လာကြကာ သန့်ရှင်းကျန်းမာသော စားစရာများကို ဝယ်ယူစားသုံးပိုင်ခွင့် နည်းပါးကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ကလေးများသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အမျိုးအမည်ပင် မသိကြသည်ကို တွေ့ရသောအခါ တိုနီ လန့်သွားခဲ့၏။ ကျောင်း၏ တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် စွန့်ပစ်ထားသော ရပ်ရွာဥယျာဉ်တစ်ခုရှိလေရာ တိုနီ အကြံတစ်ခုရသွားသည်။ ဖုန်းတော့နည်းနည်းဆက်လိုက်ရသည်။
ဒေါက် . . . ဒေါက် . . . ခြေအိတ်အပိုများ ရှိပါသလား
အေးစက်လှသော နယူးယောက်၏ ဆောင်းရာသီတွင် အိမ်ခြေမဲ့များ ရှင်သန်ရသည်မှာ မလွယ်ကူလှပေ။ အဒီနာလင့်ချ်မန်းဆိုသူ အမျိုးသမီးငယ်သည် မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ အိမ်ခြေမဲ့များ စားသောက်ရေးအတွက် ကူညီနေခဲ့သည်မှာ နှစ်အနည်းငယ် ကြာခဲ့လေပြီ။
မကြာမီ အနာဂတ်ပညာရေးဟာ ကျောင်းကို ကျောင်းသားလာမှဆိုတဲ့ အယူအဆ ပျောက်ကွယ်သွားမယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ကျောင်းခေါ်ကြိမ်သတ်မှတ်မယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တစ်နေ့ ဘယ်နှနာရီဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ သတ်မှတ်မယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်လောက် ရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ အရည်အချင်းကို သတ်မှတ်တဲ့ခေတ် ရောက်လာလိမ့်မယ်။
လူတွေက စာဖတ်ခြင်း၏ အရေးပါပုံကို နားမလည်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းစာအုပ် ဖတ်ခိုင်းရပြီဟု ထင်ကြသည်။ မြို့ငယ်ရွာငယ်လေးများတွင် နေထိုင်ကြသူ အိန္ဒိယပြည်သူများအတွက် စာအုပ်စာတမ်းရရှိဖို့ ရှားပါးသည်ကလည်း အကြောင်းရင်း တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
ရပ်ရွာတစ်ခုဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်စေ အမျိုးသမီးအရေအတွက်သည် အမျိုးသားအရေအတွက်နှင့် မတိမ်းမယိမ်းရှိတတ်သည်။ ဒေသ၏ ကံကြမ္မာကို အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်အကောင်အထည် ဖော်ကြသည်ရှိသော် လူတစ်ရာလုပ်ရမည့်အလုပ်ကို လူငါးဆယ်ဖြင့်လုပ်သည့် သဘောသက်ရောက်နေသည်။
ကလေးသူငယ် အိမ်ထောင်ချပေးခြင်းကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ အာဖဂန် ရက်ပ်ပါမိန်းကလေး
မိသားစုအလိုက် မိန်းကလေးများ လဲလှယ်ကြခြင်းများလည်း ရှိသည်။ အကြွေးဆပ်သည့်အနေနှင့်လည်း သမီးမိန်းကလေးများကို အသုံးပြုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စောစီးစွာ အိမ်ထောင်ချပေးလိုက်သည်နှင့် အဆိုပါ မိန်းကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးကစပြီး ထိခိုက်တော့သည်။ အိမ်တွင်း အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုများလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။
ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းအတွင်း မွတ်ဆလင်ထောင်ကျော်၏အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့သော ခရစ်ယာန်ဖာသာ
အတိတ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ဖြစ်ရပ်ဆိုးများ၊ အပြန်အလှန် လက်စားချေမှုများက အကြောက်တရားကို ဖြစ်စေသည်။ အကြောက်တရားကို လွန်မြောက်နိုင်သည်ကား မေတ္တာတရားဖြစ်သည်။ ထိုမေတ္တာတရားဖြင့် အကြောက်တရားကို ပယ်သတ်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ထောင်ထွက် ရေပိုက်ပြင် ဆရာကြီး၏ ပညာသင်ဆု
“မိဘတွေ အိမ်ထောင်ကွဲတာဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘကွယ်လွန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေက လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့မှု ရပါတယ်။ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်မှု ရပါတယ်။ ထောင်ထဲ ရောက်သွားရင်တော့ ကလေးတွေက ဘာမှမရဘူး”
ပန်းရောင် အုပ်စုကြီးသည် လူလည်းအလွန်များ၏ အားလုံးက မိန်းမသားအရွယ်စုံဖြစ်သည်။ လူမှုရေး တရားမျှတမှုအတွက် သေရမှာကိုပင် မကြောက် သည့်ပုံများဖြင့် ဝင်လာကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ထိုအမှုကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရပြီး ရဲများကတရားခံကို အရေးယူပေးလိုက်ရသည်။ ပန်းရောင်ဝတ်မိန်းမသား များ၏ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရှားမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပါပဲဗျာ။ ကူညီရမှာပေါ့။ ဒီကိစ္စမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာအနှံ့က ဘယ်သူတွေပဲ လာလာသေမယ့် ဘေးတွေ့နေတာကို လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူး”